Umaka: khokha ifoni | Martech Zone
Umaka: khokha ifoni
Yibuphi Ubuchwepheshe Obuqediwe Ngama-Smartphone?
ULwesithathu, May 3, 2017 ULwesithathu, May 3, 2017 Douglas Karr
Siyeza ngosuku lokuzalwa lwe-10 lwe-iPhone, olwethulwe ngoJuni 29, 2007. Njenganoma iyiphi i-psychopath ekholisayo, ama-smartphones ayakwazi ukubeka phambili. Banobungane, bayasiza futhi kubonakala sengathi ngeke balimaze impukane. Sonke lesi sikhathi bangababulali abanesihluku abasusa amawashi e-alamu ebuthongweni babo futhi baqiniseke ukuthi uhlelo lwakho lwe-GPS alutholakali futhi. UJames Pelton Kuyafaneleka kuphela ukuthi izexwayiso zombhalo weselula zethule le infographic yombulali: